Daahirow Dalka u tali… Niyadsami Ku daadihi… Weligaa ha siidayn … illeyn waad dedaashoo….Dayac waad ka dhowrtee!!!!! | Somaliland.Org
Daahirow Dalka u tali… Niyadsami Ku daadihi… Weligaa ha siidayn … illeyn waad dedaashoo….Dayac waad ka dhowrtee!!!!!
May 30, 2008	Waxaa isu kay qaban waayey; Hanjabaadda Xisbiyada Mucaaradka iyo wax la’aanta ay ka keenaan wada hadalada iyaga iy Xukuumadda. Waxaa isu kay qaban waayey; Mucaaradkan qoslaya iyo hangool ruxooda iyo Tabco gudeedka Xukuumaddu la damacsantahay. Waxaa kaloo isu kay qaban waay mucaarad baan ahay, haddana waxaan u doodaa Muxaafadka iyo Xukuumadda?
Waxaa la yiri; WAAYEEL WAA AYO, jawaabtiina waxay noqotay , WAAYEEL WAA INNAGA OO AAN IS YEEL-YEELAYN. Dulucda murtidaasu waxay salka ku haysaa in aan runta laga been sheegin. Waxay ka digaysaa is yeel-yeelka iyo is maalaa kadeedka lagu baal mariyo xaqiiqa kasta oo jirta. Tusaale ahaan, Waxay ka digaysaa in aan tuuga dhibane lagu sheegin, Dhibanahana aan tuug xadhka goys ah lagu tilmaamin. Arrimaha siyaasadeed ee maanta Dalka S/land ka aloosan ayaa u muuqda qaar lagu maamulayo “ISYEEL-YEEL IYO IS-MAALAAKADEED”. Waxa la gaadhey in kii madaxa ku socdana la yiraahdo isagaa sax ah, Kii cagaha ku soda ee caqligiisa qabana la yiraahdo saliidda ayuu soo sarrifayaa!
Beryahan dambe isyeel-yeelka iyo ismaalaakadeedka dalka ka jira waxa weeye in wixii siyaasadda ka khaldamaba dusha laga saaro Mudane Daahir Rayaale. Waar daahir Rayaale fara badana! Waar Daahir Rayaale awooddiisu fara badana ! Waar caqliga Daahir Rayaale mooyaan e miyaan caqli kale dalka ka jirin! Waar Daahir Rayaale mooyaan e miyaan dalka cid kaleba ku wehelin! Waar Dalka miyaan Distoor iyo shuruuci ka jirin! Waar Dalka miyaan Laba Gole Jirin! Waar dalku miyaanu lahayn Xisbiyo mucaarad iyo taageerayaal ! Waar Dalku miyaanu Aqoon-yahan lahayn! Waar Shicibkii Xilka Xukuumadda u igmaday meeyey! Waar Boqoradii , salaadiintii, Cuqaashii iyo wax garadkii kale xaggee ka dhaceen!
Waxaa la yiri; Indha wax keliya araka waa indha la’aan. Dhego wax keliya maqlana waa dhega la’aan. Waxaan uga jeedaa, dhegahiinu yaanay noqon kuwo Daahir Rayaale oo keliya aad ku maqashaan. Waxaan uga jeedaa indhahiinu yaanay noqon kuwa Daahir Rayaale oo keliya aad ku aragtaan. Waxaan kaloo uga jeedaa in aanay arrimuhu idinka noqon “WIXII XUNBA XAAWAA ISKA LEH”.
Haddii aan la is-yeel-yeelayn, taariikhdana laga been sheegayn, Dalka waxaa lagu xoreeyey maskax midaysan, niyad midaysan, qalbi midaysan, aragti midaysan,cod midaysan, yidi diilo Midaysan, Hub midaysan iyo dhaqaale midaysan. Ummaddu waxay mid ku wada noqotay Hadaf iyo ujeeddo cad oo ah in taliskii ziyaad barre laga xoroobo. Waxay ummaddu ahayd ummad meel qudha u wada jeedda oo aanay jirin wax khilaafaad ah oo dhexdooda ku sameeya kala baydh-baydh iyo tafaraaruq lagu guul darraysto. Midnimadaasu waa ta keentay guusha iyo goonni siu taaga Somaliland.
Arrinta Maanta jirtaa waa mid ka duwan midnimadii, wada tashigii iyo wada shaqayntii guusha lagu keenay, laguna sii kobcin lahaa, lana gaadhsiin lahaa geedkii guusha iyo gobanimada la hadhsiin lahaa. Waxaa la galay marxalad dan gaar ah mooyaan e aan dan guud iyo mid qaranimo toonna cidi isugu iman. Danahaas gaar ahaaneed ayaa waxay noqdeen kuwa khuseeya shakhsiyaad gaar ah, kuwa khuseeya kooxo gaar ah, kuwo khuseeya beela gaar ah, kuwa khuseeya Gobollo gaar ah, kuwa khuseeya Degmooyin gaar ah iyo kuwo dhinac ay u jeedaan iyo dhinac ay ka jeedaan cidina fahmayn oo iyagu iska jaha wareersan, isla markaasna ku hafta habaaska iyo boodhka ay kiciyaan kuwa danaha kala gaar gaarka ah ku kala bahoobey.
Ama Naxli ha ku jiro ama Naruuro ha ku jirtee, Dalka maanta waxaa ka jira; Gobolo iyo Degmooyin Damashaad ku jira iyo kuwo iyagu dayac iyo darxumo la uubataynaya, Waxaa jira duul guryahooda loo xaday ku istareexaya iyo kuwa laga xaday oo aan warba u ahayn iyo weliba qaar u dudaya maxaa gurigayga la iigu xadi waayey. Waxaa jira qoon sunta loo qoosho sed-bursiinyo ahaan isla bar barinaya oo gudcurka la raaca. Arrimahaas aan tilmaamay iyo qaar kaloo badan oo maanta dalka ka jiraa ayaa waxay ka mid yihiin dedaalada ugu waaweyn ee lagu kasbado Guul darrada, Gunnimada iyo Bur-burinta Maamuuska Qaranimadu leedahay.
Shaki kuma jiro in maanta xukuumadda iyo inta ay is xulufaystaanba siyaasadoodu ku qontonto danahooda gaarka ah, isla markaasna ay meel ku qafileen caddaaladdii, dimuqraadiyaddii iyo siyaasaddii lagu hagi lahaa dalka iyo dadkiisaba. Sida dadku caamo yihiin, waxay xukuumaddu ku beer laxawsataa shicibka, haddaad noo fiirsataan(xukuumad ahaan), nabadda aad dugsanaysaan ayaa cirka laga eegayaa. Taas oo micnaheeda rasmiga ahi tahay haddii dalkan midnimo iyo isku duubni beri ka jirtey, laguna xoreeyey, maanta midnimadii meesha ma taallo, cid wax samayn kartaana ma jirto. Weli lama hayo cid tiraahda “KAM SHUUFNAA MARAAKIIB MACADALAA HUURI” ama ku quuso Taliskii Ziyaad Barre.
Muruqa laba suulle ninba si ku ah. Su’aasha maanta cid waliba is weydiinaysaa waxay tahay, Hanjabaadihii iyo Hogatusaalooyinkii Xisbiyada Mucaaradku xaggee ka dhaceen. Maxay shicibka iyo Caalamkaba taageero kaga doonayaan? Maxay doonayaan inay kursiga ku hantaan? Goormay siyaasadooda miskiinaysan ka gudbi doonaan? Goormay go’aan qaadasho geesinima leh ku hawl geli doonaan? Goorma ayey Xafladaha iyo soo dhoweynta xad dhaafka ah ee ay taageerayaashooda ku soo biira ku soo dhoweeyaan, guushooda iyo waxtarkooda u aayi doonaan?
Akhristayaasha sharafta mudanow, aniga arrimo badan ayaa isu kay qaban waayey. Bal inaad ila qabtaan iyo in aan anigu cidla ku jaha wareersanahay, waxaa isi kay qaban waayey; Hanjabaadda Xisbiyada Mucaaradka iyo wax la’aanta ay ka keenaan wada hadalada iyaga iy Xukuumadda. Waxaa isu kay qaban waayey; hanjabaadaha madhan ee Mucaaradku in aay daaqadda uga dhacayaan Madaxtooyada iyo haddana u doodista ay u doodaan in aan Hawlaha Xukuumadda la fara gelin….. Cajiiiiiiiib. Waxaa isu kay qaban waayey’ doorasho de-dejinta Mucaaradku ku doodayo iyo haddana sii fogaynta iyo ku carqaladaynta diiwaan gelinta ah calaal tima ka soo baxeen.Waxaa isu kay qaban waayey; Dalkan maanta bilaa Madax weynaha ah iyo sida aan cidiba uga hadlayn. Waxa isu kay qaban waayey; Sida arrimuhu u murugsanyihiin iyo sida guurtidii loo fasaxay. Waxaa isu kay qaban waayey; Diiwaan gelin ha la sameeyo iyo xeerkiisii oo aan weli meel lagu tiiriyey aanay jirin. Waxaa isu kay qaban waayey; Mucaaradkan qoslaya iyo hangool ruxooda iyo Tabco gudeedka Xukuumaddu la damacsantahay. Waxaa kaloo isu kay qaban waay; Mucaarad baan ahay, haddana waxaan u doodaa Muxaafadka iyo Xukuumadda?Waxaa isu kay qaban waayey; Muxaafadka maalin walba ku soo biiraya Xisbiyada Mucaaradka iyo halka salaaddu uga xidhmi la’dahay.
Arrimahan aan kor ku xusay iyo qaar kaloo badan marka aad caqligaaga la kaashato ayaad mar-marka qaarkood is weydiinaysaa; tolow Xisbiyada Mucaaradka iyo Xukuumadda Daahir Rayaale ma xeelada hoose ayey kuwada socdaan . Weerarka iyo weerar celinta had iyo jeer ka dhex aloosanna ma waxay la mid yihiin farsamooyinkii iyo qisooyinkii Yoonis Tuug iyo marwadiisu ay oosha kaga wada xoogsan jireen baa?
Geba-gebo iyo Gunaanad
Wuxuu yiri ninkii aanay uga dambayni(Shilinkii ugu dambeeyey) “Wada Hadalba Haadkaas ayaa ka hadhay”. Mucaaradow, Maanta waxa la sugaaba waa waxa ka soo baxa kulanka idinka iyo Xukuumadaa, maalinta Axadda, Taariikhduna tahay 01/06/2008, waa haddiiba uu qabsoomo!!
Haddii Mucaaradku ku guulaysto waa mid la filayey. Haddii Xukuumaddu ku guulaysato, waxaa hubaal ah inta Xisbiya kale oo mucaarad ah la helayo in Heesihii iyo ammaantii Mudane Daahir Rayaale Bilaabmayso. Aniguna dhammaystiri doono heestaydan:
Duqaydi wax garadkiyo
Shicibkaa ku doortee
Daahiroow Dalka U tale
Niyad sami ku daa-dihi
Weligaa ha sii dayn Illeyn waad dedaashoo
Dayac waad ka dhowrtee.